PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2019-01-10 - Babesaya kuba ngooDubul’ekhephuza!
Babesaya kuba ngooDubul’ekhephuza!
Isolezwe lesiXhosa - 2019-01-10 - EZEMOTO NEENCWADI - MANGALISO SOMDAKA
BHOTANI bafundi besiXhosa! Nakaloku nje enkundlen’ apha kusatshila mna. Ndiza ndijiwuzisa incwadi endiqhayisa ngayo ethi, Nditshw’ iintsika zesizwe.
Le ncwadi iluhlobo lwenoveli yaye ibhalwe lusiba luka-N.P Mgolombane. Yashicilelwa phaya ngomnyaka ka2016.
Umbhali ke uzipapashele ngokwakhe le ncwadi ngoncedo lweSebe lezeMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko kwiphondo laseMpuma Koloni.
Le ncwadi ivelela iinkalo ezohlukeneyo zobomi kwaneengxaki kuquka imingeni abadibana nayo abantu basetyhini kweli.
Ibikhe yaxhaphaka into yokutshatiswa kweentombi zeli lizwe zingatshatanga. Loo mbudumbudu ibisenziwa ngumbhutyuzo karhulumente wethu.
Ilizwe lethu linembali yokubachwethela bucala abantu ababhinqileyo kwimiba eliqela. Ukanti impathogadalala ngakubo nentyontyelwa lisiko lokuthwala elalenile umzi iwugungqisile. Eli siko nelibonakala lingenandawo kwixesha esiphila kulo libenendima enkulu ekungawazinzisini amakhaya aliqela.
Xa umntu esendiswa engafuni, unokuyithobela njani imithetho yomzi? Uthi akayikunkwalambisa njee kuba esoyika ukubethwa? Ke yona intlonipho elindeleke kuye, uthi iyakubakhona nje?
Kubantwana bakhe uyofundisa mfundiso ni? Kule mibuzo ndiyikrozise ngentl’ apha, bekungayi kubakho kuthintitha xa iphendulwa ngeliya xesha imeko yayisavumela le mpilo. Kodwa kwezi mini itsarha isathethwa ngenxa yamava okuxhatshazwa komntu obhinqileyo.
Apha uDebra uzibona enoxanduva lwemizi emithathu. Kaloku uNozenzile noNoyongo eyabo imizi bayihoye bengayihoyanga, bayazi xa kufika ubumnyama ukuba banemizi.
Ngabamelwane bakaDebra aba, nababechitha ixesha labo elininzi bekwaKK, isikroxo sotywala saselalini.
Aba bafazi babini bathi noko bezele benabantwana, benamadoda, bendile - ababi nasazela soko, bahlale iphele nqunqe imini bengafikelwa sazela. Hayi ke yona intlonipho ngasemadodeni abo, yayingekho nje tuu.
Uthi mhlawumbi asikokumbukrwa ngabayeni babo ababekufumana okwenza babenaloo nkani? Andithi kaloku aba bafazana benda besebancinane, bethwalwa bengathandi.
Ke uthi asiyiyo inzondo yoko eyenza benze njee nakanjani? Mhlawumbi ubudala babayeni babo nako kwabatheza amandla nomdla kuloo mendo wabo.
Sendiqashisela nje nam ndingatyhalwa nto ke noko.
Inkxalabo kaDebra yamenza akonwaba, ahlale ebusuku ecamngca ephicana neqhinga elinokuhlangula abamelwane bakhe.
Wathi esakulifumana icebo wancokola nomyeni wakhe ongazange achithe xesha koko wayokuncokolela iNkosi elo cebo lophuhliso lwelali leyo nelaliza kwenza wonke umntu welali ahlale enento yokwenza.
Okunene iNkosi yendawo yakhawuleza yawaqokelela amaRhulumente ukuza kuphalaza ezo ndaba zathi zamkelwa ngezandla ezingenamikhinkqi.
Tyhini madoda! Yatshintsha ilali, lancipha nenani labantu abahlala kwaKK, uNozenzile noNoyongo nabo baphuma kwelo qula lotywala ababezoyelisele kulo.
Yaphakama ilali, uphuhliso lwabonakala. Ziintsika zesizwe ke ezasondeza loo nkqubela kuhlangulwa amanye amabhinqa.
Lilizwe elaziyo ukubaluleka kweembokodo elibahloniphayo abantu basetyhini. Kazi njengokuba sisetywaleni sonke kwezi mini, intsika izofunyanwa phi na? Ndiyaxoka na xa ndisithi siphila kwaJuliwe?
Mandime kule ndawo ngelithi, Ndiniyekile!
Owenu kusiba noncwadi lwesiXhosa!